Xulka Qaranka Soomaaliya: Maxaa la gudboon markey dalka dib ugu noqdaan? - Jigjiga Online
HomeSomalidaXulka Qaranka Soomaaliya: Maxaa la gudboon markey dalka dib ugu noqdaan?
Xulka qaranka kubada cagta ee Soomaaliya ayaa shalay soo gaaray heer wanaagsan, ka dib ciyaartii ay la yesheen xulka Zimbabwe, inkastoo lugtii labaad ee ciyaarta laga badiyay.
Ciyaartaas oo ahayd mid taariikhi ah, maadaama Soomaaliya ay u ahayd markii ugu horesay ee ay badiso ciyaar ka mid ah isrebreebka koobka adduunka ayaa haddana waxay taas muujisay sida dalka uu ugu baryay waa cusub oo dhanka ciyaaraha.
Xulka Soomaaliya ayaa Jabuuti kaga badiyay dalka Zimbabwe. Arrinta xiisaha badan waxay ahayd in 10 ka mid ah 11-ka laacib ee ciyaarta lagu billaabay ay ka yimaadeen qurbaha.
Maxay u baahan yihiin ciyaartoydan?
Ciyaartoyda oo qurba joog ah, waxaa laga kala keenay waddamo kala duwan, waxayna ka tirsanyihiin kooxo kubadda heer sare ka gaaray, sida uu sheegay Siciid Cabdi Haybe oo qeyb ka qaatay isu keenidda laacibiintan.
Dhallinyaradan waa markii ugu horeysay ee ay isla ciyaaraan kubad, waxayna u muuqdeen kuwo u baahan in ay waqti badan isla qaataan, isna fahmaan sida ay kubadda isugu dhiibayaan.
“Waxa ugu weyn waxay ahayd in dhalinayarada la isu keenay iyo in markii ugu horeesay oo ay bannaanka ku wada ciyaareen. Kooxaha marka la isu keeno way adag tahay in ay isla qabsadaan, si ay isu bartaanna way adagtahay”, sidaas waxaa BBC-da u sheegay Maxamed Axmed Deysane oo fallanqeeya ciyaaraha, horeyna uga mid ahaa laacibiintii xulkii qaranka Soomaaliya ee ka hor burburkii dowladdii dhexe.
Deysane ayaa intaas raaciyay in ciyaartoyda Soomaaliya ay muujiyeen dadaal weyn, xiriirka kubada cagta iyo dadka isu soo uruuriyay na ay shaqo wanaagsan qabteen, loona baahan yahay in meeshaas laga sii wado oo tababaro loo sameeyo, ayna tijaabooyiin kale la sameeyaan dalal kale.
“Dhallinyaradan xirfaddoodu waa heer sare; kooxo heerar kala duwan ka ciyaara ayayna ka tirsan yihiin, marka dhammaan dhallinyarad waxay diyaar u ahaayeen in ay calankooda iyo dalkooda matalaan”, Ayuu yiri Siciid Cabdi Haybe.
Siciid wuxuu aaminsan yahay in Algeria, oo ku guuleysatay koobka Qaramada ee Qaaradda Afrika, ay ka faa’iiday dhallinyaradii dibadaha ka ciyaaraysay.
“Xulkii Algeria ee 23ka ka koobnaa hal mid oo kali ah ayaa ka dheelayay gudaha dalkooda.” Ayuu yiri.
Jimicsiga iyo tababarka loo sameeyo ciyaartoyda ayaa qeyb muhiim ah ka qaata jir-dhiska iyo qaab ciyaareedkooda, taas oo gacan ka geysata awoodda ciyaartoyga, waxaana inta badan kooxaha kubada cagta ay sameyaan tababar iyo jirdhis joogta ah, si ay awood ugu yeeshaan orordka iyo in aan si fudud lagu ridin.
Sucaad Samaara oo ah gabar ka faalloota ciyaaraha ayaa BBC Somali u sheegtay: “Xilligan waxaa loo baahan yahay ciyaaryahanno khibrad u leh kubada cagta kuwaas oo ay ka go’antahay guul, tababar fiican iyo daryeelna waa in ay helaan”.
Sucaad ayaa intaa raacisay in kooxdan hadda dhisan loo baahan yahay in la dhiira-galiyo oo la xareeyo, tababar ficanna la siiyo, si ay u noqdaan ciyaartooy wanaagsan oo marwalba u dheela xulka Qaranka.
Maal-gelinta xulka Qaranka
“Xulka Qaranka Soomaaliya wuxuu u baahanyahay maalgalin xooggan waliba doorka dowladda iyo gacsatada ka maqan, waxbadan ayaa hagagaya haddii ay helaan maalgalintaas”, ayay tiri Sucaad Samara.
Daysane dhankiisa wuxuu qabaa fikrad taa la mid ah wuxuuna yiri: “Kubada cagta adduunka waxay isu badashay lacag in la geliyo, anaguna waxaan u baahanahay in xiriirka kubadda cagta, dowladda, ganacsatada, dadweynaha ay lacag geliyaan ciyaartoyda Qaranka Soomaaliya, juhdi weynna la geliyo, si ay horey ugu sii socdaan.”
Xog xasaasi ah oo ku saabsan ‘dilkii’ Jamal Khashoggi oo lasoo bandhigay